Wangeela Maatiwos boqonnaa 24 irratti barreeffamee akkuma jirutti jalabultii bara dhumaati addunyaa kanaatti daandiwwan/amantaaleen/ gaarii faakkatanii garuu kan gara dogongoraa fi badinsatti nu geessan hedduun yerootti maqaa adda addaatti dhaabbatanii jiranidha. Daandiiwwan kunis daandii ishee duraa fi dhugaa irraa yeroo adda addaatti kan foxxoqanii fi falaasama namootaan kan hundaa'an yoo ta’an yeroo ammaa baayyina isaanii irraan kan ka’e lakkofsa isaanii illee seeran beekuf baay’ee nama rakkisa (maqaa kiristoosiin kan socha'an lakkoofsisaanii 3000 ol ni ta'u jedhama). Kan kiristaana ofiin jedhanillee yommuu ilaallu yeroo ammaa kanatti maqaa hedduutiin kan hundaa'an, karaan dhugaa kan kiristaanummaa ishee jalqaba Kiristoos hundeesse fakkeessanii kan nama karaa dhugaarraa kaachisan hedduun ni jiru. Daandiin gara jireenya bara baraa fi boqonnaa barabarraatti nama geessituu fi karaan isheen dhugaa garuu tokkodha.Akkuma amantaa tokko, cuuphaa tokko, Gooftaa tokko jedhee Qulqulluun Phaawulloos barreesseetti. (Efe. 4:5)
Read more: Seensa Seenaa Mana Kiristaanaa